Date: 22 août 2017 - 15:15
Tohin' ny tantarako, nandeha teny ny andro sy volana, nahita olona tia ahy aho
Mba ahoana no hanehoana fitiavana amin'ny vehivavy e, tena tsy haiko intsony ahoana izany..
Mino aho fa ho hitan' ilay olon-tiako ihany ity fa mety hamaly eto ihany izy
Re: fanehoana fitiavana
Date: 22 août 2017 - 15:30
Manjary raha tantaraina eto daholo ny tian'ny vehivavy dia lasa tsy surprise aminy tsn satria efa hitany bonera eto doly.
Date: 22 août 2017 - 15:36
Ohatra mivaingana tsara ity omeko anao ity.
Raha mihinana voanjo ianao dia izao atao azy
Ty misy voandrou ra inana ty tonga dia love love be izy
Njoun. >> milay ka
Date: 05 septembre 2017 - 15:41
Njoun< sady za tena tia voanjo,
"sois- toi même", aleo hivoaka hoazy izay ao am-ponao sy ao an-tsainao, aza heritreretina be fa manjary otrany oe mianatra lesona dia miezaka manao pratique tsy ho diso.
Ny lasa momba ny lasa.
Raha tianao ny fitiavantsika dia io koloina tsy hihena, sy hamiratra hatrany. Aza avela hisy hisompatra "bas-toi pour ton amour" dia arak'ilay hiran'i Eric Manana natolotrao ho ahy iny "izay ratranao dia feriko" j'aime eeee!
Fanehom-pitiavana dia mifamaly fa tsy oe ianao irery no miezaka (réciproque)
Haino tsara ilay izy atreto ary tsy misy atahoranao ny amin'izay r'i malalako, nous sommes sur la bonne voie,
Date: 06 septembre 2017 - 04:47
za iany>> merci tu me rassures